Mamwe maonero akanaka kwazvo muEurope akakosha uye ari nyore kusvika. Kunyange zvakadaro, rwendo rwekuEurope runogona kudhura zvakanyanya kana ukasaronga pachine nguva. Nepo misoro mizhinji yeEurope inotambanudza bhajeti yako yekufamba, kune nzvimbo dzinoverengeka dzekufamba muEurope dzinokwanisika chose. Pamusoro pedu 7 nzvimbo dzakawanda dzinodhura dzekufamba muEurope dzine bhajeti-dzakanaka uye hadzi pfuure ma50 euros pazuva nemunhu.
Aya matombo akavanzika haawire kure kumashure mukunaka uye mashiripiti, kupfuura maguta akaita seParis neBerlin.
Pamusoro pe, ari inonyanya kuzivikanwa muGermany, inoshamisa Cologne kereke yakasununguka kushanyira. Iyo Gothic dhizaini, pendi magirazi mahwindo, uye maonero erwizi ari epic. Kana iwe uchida hunyanzvi, ipapo Cologne ane mamiziyamu makuru kana unonakidza hunyanzvi hwemumugwagwa muEhrenfeld. Iyi nharaunda ndiyo hudyu uye inoyevedza chikamu cheCologne, iyo-yekuisa nzvimbo yekofi uye mazambiringa.
Guta iri zvakare kumusha kunoshamisa castle uye mapindu akasununguka kushanyira, uye kana iwe uchida kukwira kumusoro kune epic maonero, ipapo mari yekupinda mushongwe iri shoma pane 5 euros. Imwe sarudzo huru yekuongorora guta iri nekubatana nerwendo rwekufamba rwemahara uye kusangana nevamwe vafambi kana bhuku a Cesky Krumlov rakavanzika guta kufamba rwendo zvechikwata. Nenzira iyi iwe unogona kuwana zvakavanzika zveguta, ngano, uye matipi ekuti uve nerwendo runoshamisa kuenda kune yengano nyika.
Mahombekombe egoridhe, ngano dzaJoan weArc weRuen, chitsuwa cheMont St. Michel monastery, ingori mashoma ematombo anokosha muNormandy. Iyi nharaunda yakanaka ndeyekufamba kwemaawa maviri kubva kuParis, asi kusiyana neguta guru reFrance, ndiyo imwe yenzvimbo dzinodhura kwazvo dzekufamba muFrance.
Unoda kuti embed yedu Blog pambiru “7 Most Affordable Places To Travel In Europe” into your site? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-affordable-places-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)